Budget smartphone Nokia 2.3 natara ikike eji eme ihe ruo ụbọchị 2 | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
HMD Global ekwupụtala ekwentị mmefu ego ọhụrụ na Egypt. Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-atụ anya mmalite nke Nokia 8.2, n'ezie ihe omume ahụ bu n'uche ịmalite Nokia 2.3.
Ihe a bu ihe eji abanye ulo nke nwere ezigbo okike ma nwekwaa onwe ya rue ubochi abuo. HMD Global kwuru na ngwaọrụ ahụ adịla njikere ịrụ ọrụ na gam akporo 2 ma emesịa. Ọ na-ekwekwa nkwa afọ 10 mmelite ngwanrọ na afọ 2 nke mmelite nchekwa.
Nokia 2.3 ka nwere ike ịbụ ekwentị kachasị mma na ọkwa ntinye nke ewepụtara na 2019. N'agbanyeghị ezumike, nke ọtụtụ ngwaọrụ ndị dị ugbu a nwere, akụkụ azụ ya mechara bụrụ ihe mara mma nke ukwuu. Na azụ enwere shei polymer nwere ihe eji eme nanotextured atọ.
Nokia mekwara ụdị ụcha dị mma - acha anụnụ anụnụ (cyan), nke na-adọta mmasị kacha ukwuu, beige na isi awọ (unyi). Dịka ekwentị ndị Nokia ndị ọzọ, nke a nwere bọtịnụ dị iche maka ịkpọ onye enyemaka olu Google.
Ajuju 22 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,320.